yarzartun: October 2016
စာစီစာရိုက်နဲ့ဆိုင်တဲ့ softwareတွေပါလို့ ပြန်shareလိုက်တာပါဗျ
‎Aung Mon Hein‎ to ကွန်ပြုတာဆိုင်ရာ မေးမြန်နိုင်သောဂရု
ကွန်ပျူတာ ဆော်ဝလ်မျိူးစုံကိုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်--------------------------- ကွန်ပျုတာအတွက်ဆော့ဝဲလ်များစုစည်းမှုး
Adobe Dreamwaver CC
Alpha Zawgyi Myanmar Unicode 2008 32
Alpha Zawgyi Myanmar Unicode 2008 64
Magicolor 1690 MF Driver
Cannon LBP 6000 Driver
Cannon LBP 2900 Driver
Cannon LBP 3050-3018 Driver
Cannon MF 220 series Driver
Adobe PageMaker 7.0 Update Installer
Windows 8 / 8.1 / 10 Gadgets
ASUS H61 Series ( 8.1 Ready)
Chattha Sangayana Tipitaka-4.0
Log off Background
Windows7NetFrame
ပိဋက ၃ ပုံ ပါဠိ နိဿယ စာအုပ်စဉ် Software
ဝိနယ ပိဋက ပါဠိတော်...နိဿယ...မြန်မာပြန်
ပိဋက ၃ ပုံ မြန်မာပြန်သီးသန့် PDF File များ။
ပိဋကသုံးပုံ အဋ္ဌကထာ-ဋီကာ နိဿယအစုံ
credit@ orginal uploader
Posted by dawallay lay at 5:18:00 AM No comments:
Photoshop Cs5 Portable Full | 123MB
လင်း(စွယ်စုံ) Adobe Photoshop
Photoshop Cs5 Portable ကို တင်ပေးထားတာ ကြာပါပြီ လင့်သေသွားလို့
ခု ဒီကောင်လေးက Install ပြုလုပ်ရတာ လွယ်ကူပြီး ဖိုင်ဆိုက်လည်း
Size 123MB အနည်းငယ်မျှသာ ရှိပြီး ၊အသုံးပြုရတာလည်း လျှင်မြန်စွာ ပေါ့ပါးတာကြောင့်
သုံးဖူးသူတိုင်း စိတ်တိုင်းကျ ဖြစ်စေမှာ အမှန်ပါဗျာ။ ပြန်ဒေါင်းရလွယ်ကူအောင်လို့လည်း
အောက်က Link ကနေ Download လုပ်ယူသွားနိုင်ပါတယ်။
Posted by dawallay lay at 3:55:00 AM No comments:
Longtion AutoRun Pro Enterprise 14.8.0.400 + Keymaker Full |15.5MB
Longtion AutoRun Pro ရဲ့ နောက်ဆုံးထွက် Updates လေးပါ။
ISO image နှင့် software တွေကို CD / DVD Burner ဖြင့်သော်လည်းကောင်း
USB flash drive သို့လည်း အလွယ်ဆုံး AutoRun ဖြင့် Burner ပြီ အသုံးပြုနိုင်မည့် Software ကောင်းလေး တစ်ခုပါ၊၊
ထိုအပြင် Text images လည့်သွင်းပြီး အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပြီ wallpapers, panels, buttons, sound effects တွေကို အလွယ်ဆုံး အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
(Patch )ဖိုင်လေးကို ထည့်သွင်းပေးထားပါတယ်။
Windows XP / Vista/ 7/ 8/ 8.1 /10/ (32 Bit & 64 Bit)
Posted by dawallay lay at 3:00:00 AM No comments:
Adobe After Effects CS6 လေးကို Portable Full ဗားရှင်းလေးကို တောင်းဆိုထားကြတဲ့ သူတွေအတွက် ဖိုက်ဆိုဒ်လည်း အသေးဆုံးဖြင့် တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
After Effects ဒီဇိုင်းတွေကို သုံးချင်တဲ့သူတွေအတွက် မရှိမဖြစ် ဆောင်ထား
သင့်တဲ့ ဆော့ဝဲလ်လေးပါ။ Music Videos, Commercials, Animation, Titles
Full Version အဖြစ် အမြဲတမ်း အသုံးပြုလို့ရအောင်လို့လည်း Portable ဖိုင်လေး ဖြင့် တင်ပေးထားပါတယ်။
Posted by dawallay lay at 2:58:00 AM No comments:
‎Crystal Genïus‎ to ကွန်ပြုတာဆိုင်ရာ မေးမြန်နိုင်သောဂရု
ကွန်ပျူတာမှာ 32-bit Windows OS တင်မလား၊
64-bit Windows OS တင်မလားဆိုတာ မပြောခင် Processor
(CPU) အကြောင်းကို ဦးစွာ အနည်းငယ် ပြောချင်ပါတယ်။
32bit နဲ့ 64bit Processor
Processor တစ်လုံးရဲ့ အတွင်းပိုင်းမှာ Register ဆိုတဲ့ အစိတ်အပိုင်း
တစ်ခု ရှိပါတယ်။ Processor မှ လက်ရှိ execute လုပ်ဖို့ လိုအပ်တဲ့
data များကို ထည့်ထားတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်။
Processor ထဲမှာ data/ instruction တွေ တစ်နေရာနဲ့တစ်နေရာ
ပေးပို့သယ်ဆောင်ပေးတဲ့ Internal Data Bus ဆိုတဲ့ လမ်းကြောင်း
တစ်ခုလည်း ရှိပါတယ်။ ၎င်း Internal data bus ပေါ်မှာ တစ်ကြိမ်
တွင် data ပမာဏ ဘယ်လောက်ထိ သယ်ယူပေးနိုင် သလဲဆိုတာ
Register ရဲ့ size အပေါ် မူတည်ပါတယ်။
32bit register သုံးထားတဲ့ processor ကို 32-bit Processor
ဟု ခေါ်ပြီး 64bit register သုံး ထားတဲ့ processor ကို 64-bit
Processor ဟု ခေါ်ပါတယ်။
Intel မှ ထုတ်သော 80386 မှစပြီး Pentium4processor များထိ
32-bit register များကိုအသုံးပြု ထားပါတယ်။ ဒါကြောင့် 32-bit
processor နဲ့ တပ်ဆင်ထားတဲ့ Computer များမှာ 32-bit
Windows OS နဲ့ Application များကိုသာ Install လုပ်နိုင်ပါတယ်။
64-bit Windows OS နဲ့ Application များကို Install လုပ်လို့
Intel ရဲ့ Pentium Dual Core လောက်ကစပြီး ယနေ့အထိ
Processor များတွင်တော့ 32bit နဲ့ 64bit register နှစ်မျိုးလုံး ပါရှိတဲ့
အတွက် 32-bit OS ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ 64-bit OS ပဲဖြစ်ဖြစ် အသုံးပြုလို့ ရပါတယ်။
32-bit Windows နှင့် 64-bit Windows
64-bit CPU နဲ့ computer ကို စွမ်းဆောင်ရည် ပိုမို အသုံးချနိုင်ဖို့ 64-bit Windows ကို အသုံးပြုသင့်ပြီး ၎င်း Windows အတွက် 64-bit Driver များ တင်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
32-bit Windows ကို သုံးမည်ဆိုပါက CPU တစ်လုံး ကို စွမ်းရည်ပြည့်
ယခုနောက်ပိုင်း model မြင့် Laptop တွေအချို့မှာ ဆိုရင် 64-bit OS
အတွက်ပဲ Driver ထုတ်ပေးပြီး 32bit အတွက် driver support
မလုပ်တော့တာ တွေ့ရပါတယ်။ ၎င်း Laptop များကို 32-bit Windows
တင်သုံးလို့ရသော်လည်း driver install လုပ်တဲ့အခါ component device အားလုံးအတွက် driver ရှိမည် မဟုတ်ပေ။
နောက်ထပ် အရေးကြီးတဲ့အချက်က RAM (memory capacity) နဲ့
32-bit Windows OS ရဲ့ အမြင့်ဆုံး support လုပ်နိုင် တဲ့ RAM
ပမာဏဟာ 4GB အထိသာ ဖြစ်ပါတယ်။ သဘောကတော့ 32-bit
Windows သုံးထားရင် computer မှာ RAM ကို 4GB ထက်ကျော်
အသုံးပြု၍ မရပါ။ (ဥပမာ. 6GB တပ်ထားပါက ပိုတဲ့ 2GB သည် အပို
RAM ကို 4GB ထက်ပိုသုံးထားပါက 64-bit Windows ကိုသာ
အသုံးပြုသင့်ပြီး 64-bit Windows ရဲ့ အမြင့်ဆုံး support လုပ်နိုင်တဲ့
RAM ပမာဏဟာ 16.8 million terabyte ထိ ဖြစ်ပါတယ်။
Computet တစ်လုံးမှာ RAM အများဆုံး တပ်ဆင်နိုင် မှုသည်
Motherboard ရဲ့ Chipset အပေါ်မှာလည်း မူတည်ပါသေးတယ်။ Motherboard chipset ရဲ့ RAM support လုပ်နိုင်မှုသည် 16 GB
ဆိုပါက RAM ကို 16GB ထက် ပိုတပ်၍ မရပေ။
Windows 64-bit သုံးမည်ဆိုလျှင် ဆက်စပ် device များအတွက်
64-bit driver များ install လုပ်ရမည် ဖြစ်ပြီး Application များကတော့
32-bit ရော 64-bit ပါ install လုပ်နိုင်ပါတယ်။ အချို့ Apps များကတော့
64-bit apps များသာ တင်လို့ ရပါတယ်။
(ဥပမာ. Adobe Premier CS5software ဆိုရင် 64-bit Windows
64-bit Windows OS အသုံးပြုပါက 3D Game များ၊ 3D Aimation, Graphic app များကို သုံးသည့်အခါ စွမ်းဆောင်ရည် ပိုမိုအသုံးချနိုင်
သည့်အတွက် 64-bit Windows OS အသုံးပြုမှုမှာ ပိုမိုတွင်ကျယ်
Posted by dawallay lay at 5:04:00 PM No comments:
Trend Myanmar | 17 August 2016
လက်ရှိ ရာသီဥတုအခြေအနေအရ air-con ဟာ မဖြစ်မနေ လိုအပ်ချက်တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ ဇူလိုင်၊ သြဂုတ်လို လတွေမှာတောင် ရာသီဥတု အလွန်ပူနွေးပြီး စိုထိုင်းထိုင်းဖြစ်နေပါတယ်။ လေအေးပေးစက် တပ်ထားတဲ့ လုပ်ငန်းခွင်က ဝန်ထမ်းတွေဆီ ကြားနေကျစကားက လေအေးပေးစက် ၁၆ ဒီဂရီ အပူချိန်အထိ ချထားပေးဖို့ တောင်းဆိုမှုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါက air-con တပ်ဆင်ထားတဲ့ အိမ်တွေမှာ ကြားနေကျ စကားလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် တစ်ဆက်တည်း လကုန်လို့ မီတာခ အရမ်းတက်နေတာ တွေ့အပြီးမှာတော့ နောင်တတွေရကြပြန်ပါတယ်။ တခါတလေ မီးအရမ်းစားလို့ လေအေးပေးစက် ပိတ်ထားပြီး ပြင်ပအပူချိန်နဲ့ တလှည့်နေဖို့ လိုအပ်တဲ့အချိန်တွေ ရှိပါတယ်။ အခုချိန်ကစပြီး ရိုးစင်းလေအေးပေးစက်ဆိုင်ရာ နည်းလမ်းတစ်ခုနဲ့ ဒီပြသနာကို ကျော်လွှားနိုင်ပါတယ်။
အရင်ဦးဆုံးအနေနဲ့ AC အပူချိန်ကို 16 သို့ ဆင်းပေးစရာမလိုအပ်ပါဘူး။ အေးနေအောင် AC အပူချိန်ကို ကျွန်ုပ်တို့ အဆုံးစွန်ထိ လျှော့ချကြပါတယ်။ ဒါ သဘာဝကျပေမယ့် အခြေအမြစ်မရှိတဲ့ အရာတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်တော့ အပူချိန် ၁၆ ဒီဂရီထိ လျှော့ချစရာ မလိုပါဘူး။ ၂၃-၂၄ မှာ ထားပါ။
Air-con တစ်လုံးရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက် နောက်ကွယ်က စိတ်ဝင်စားစရာအချက်တွေက…
- မီးအားစားသုံးမှုက လေအေးစက်မှ compressor အလုပ်လုပ်မှုပမာဏပေါ် မူတည်ပါတယ်။
- အပူချိန် ၂၄ သို့မဟုတ် ၁၆ တစ်ခုခု ချိန်ညှိထားရင် compressor မှ အလုပ်လုပ်မှုပမာဏက အတူတူပင် ဖြစ်ပါတယ်။
- အပူချိန်က အခန်းအပူချိန်ရောက်တဲ့အခါ compressor အလိုအလျောက် ရပ်သွားပါတယ်။
- အပူချိန်က အခန်းအပူချိန်ကျော်လွန်တဲ့အခါ ပြန်ပွင့်သွားပါတယ်။
- ဒါပေမယ့် ပန်ကာက ဆက်လက်လည်ပတ်နေပါတယ်။
- လူ့ခန္ဓာကိုယ်က အခန်းအပူချိန်မှာ သက်တောင့်သက်သာ ရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့် အပူချိန်ကို ၂၃-၂၄ မှာ ထားပါ။
- ဒါက အမြဲဖွင့်လိုက်၊ ပိတ်လိုက်မဖြစ်အောင် ကာကွယ်ပေးပြီး မီးအားစားတာကို သက်သာစေပါတယ်။
ဒီတော့ အခုချိန်ကစပြီး ဒီနည်းနဲ့ အေးလည်းအေး၊ မီးအားလည်း ချွေတာနိုင်ပါတယ်။
Posted by dawallay lay at 3:48:00 PM No comments:
*** ကာလာအိုကေစာတန်းထိုး Sony Vegaspro12.0.367 + Keygen Full Version 32bit & 64bit...***
လာပါပြီး CBox ကနေ တောင်းဆို လာတဲ့ Ko Htein Linn အတွက် ဝါသနာ တူညီအကိုများ
လေ့လာလို ရအောက် ကာလာအိုကေ စာတန်းထိုး လွယ်ကူစွာ ပြုလုပ်နိုင်တဲ့
Sony Vaga Pro12 ကိုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်...တစ်ခြားသော Video စလိုက်ဖန်ရှင်များ
နှင့် လုပ်ဆောင်ချက်များစွာ ဖြင့်တည်ဖြတ်နိုင်ပါတယ်...
အမြဲအသုံးပြုလိုရအောင် Keygen Key ပါထည့်ထားပေးပါတယ်...
Keygen Key အသုံးပြုနည်း နှင့် ကာလာအိုကေ စာတန်းထိုး လုပ်နည်း ကို
Video ဖြင့် စုဆောင်းထည့်သွင်းထားပေးပါတယ်..
264MB ပဲရှိပါတယ် အသုံးပြုခြင်ရင်အောက်လင့်မှာ ယူသွားပါ....
Posted by dawallay lay at 4:57:00 PM No comments:
*** ကာလာအိုကေစာတန်းထိုး Sony Vegaspro12.0.367 + Ke...
Air-con မှ မီးအားစားတာ သက်သာအောင် ပြုလုပ်နည်းTrend...
‎Crystal Genïus‎ to ကွန်ပြုတာဆိုင်ရာ မေးမြန်နိုင်...
Adobe After Effects CS6 လေးကို Portable Full ဗားရ...
Longtion AutoRun Pro Enterprise 14.8.0.400 + Keyma...
Photoshop Cs5 Portable Full | 123MB လင်း(စွယ်စုံ)A...
စာစီစာရိုက်နဲ့ဆိုင်တဲ့ softwareတွေပါလို့ ပြန်share...